विजय शाहीको मृत्यु भएकै हो ? साँझपख नाकमा कपास राखीएको तस्वीर एकाएक सामाजिक सञ्जालमा भाइरल – Dailny NpNews
प्रकाशित मिति: मंगलबार, साउन १२, २०७८ समय: २२:०७:५३
आफूलाई मेमोरी किङको दावी गर्दै आएका विजय शाहीको मृत्यु भएको भन्दै एउटा तस्वीर अहिले एकाएक भाइरल भएको छ । विजय शाहीको शरिरिमा सेतो कपडा र पम्बरले ओडाइएको, नाकमा कपास राखीएको तस्वीर साँझपख एकाएक सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको हो ।
उनको तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्दै धेरैले उनलाई श्रद्धाञ्जली दिइरहेका छन् भने धेरैले यसलाई पत्याउन सकेका छैनन् । यसबारे बुझ्दा महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले सुचनाको सत्यताबारे खोजी भइरहेको जनाएको छ ।
परिसरका प्रमुख एसएसपी अशोक सिंहका सुचना आएपछि आफूहरुले खोजी गरिरहेको तर कतैबाट पनि उनको मृत्युबारे पुष्टि नभएको बताउनुभएको छ । उहाँले भन्नु भयो, ‘शाहीको मृत्युको खबर आएपछि हामी सवैतर्फ सोधीरहेका छौँ तर उनको अवस्थाबारे थापा पाउन सकिएको छैन । आफुलाई मेमोरी किङ भनेर सारा नेपालीलाई भुषमा सुताउने बिजय शाहीको आज मृ त्युको तस्वीर भाइरल भएको छ ।
बिजय शाहिका गुरु भनेर चिनिने दिपक बहादुर शाही ले सामाजिक संजालमा हालेको एउटा फोटोले अहिले बजार खाएको छ । आखिर के बिजय शाहीले आत्महत्या गरेको हुन त ? झुट सावित गर्ने प्रमाणहरु १) बिजय शाहिको तस्वीर अपलोड गर्ने शिक्षकले तस्वीर हटाएका छन ।
२) बिजय शाहीको ज्यानमा अहिले पनि सेतो सर्ट लगाइएको अवस्था छ यस्को अर्थ यो होकि शाहिले मरेको जस्तो तस्वीर खिच्न मात्रै यस्तो गरेका हुन । ३) शाही साच्चै नै मरेका हुन भने उनका शिक्षकले हस्पिटलमा मरेको भनेका छन तर उक्त तस्वीरमा कुनै पनि हस्पिटलको जस्तो सिन देखिदैन ।
४) सामान्यतया मरेको मान्छेको ओठ कालो हुन्छ अथवा आँखा मलिन हुन्छ तर शाहिको दुई टै ठिक देखिन्छ । घटना अनुसन्धान हुदैछ तापनी यो फेक भन्ने प्रमाणित हुन धेरै समय नलाग्ला ।